Izindlu Zezinhlekelele ze-Airbnb - Los Angeles Fires
Thola izindlu zezimo eziphuthumayo e-Los Angeles County and San Bernardino Counties, California
Bekunikezelwa ngezindawo zokuhlala phakathi no- September 16, 2020 nomhla ka- September 30, 2020 kubasebenzi bosizo nakubantu abaphelelwe yindawo.
Funda kabanzi Ngezindlu Zezinhlekelele
Lapho abantu bendawo bekhuthazwa ukuba banikeze abanye indawo yokuhlala
Luyini uhlelo lwe-Airbnb Lwezindlu Zezinhlekelele?
Izindlu Zezinhlekelele ze-Airbnb zixhumanisa abantu abahlaselwe yizinhlekelele nababungazi abahlinzeka ngendawo yokuhlala yamahhala. Kusukela ngo-2012, izinkulungwane zabantu zibambe iqhaza ohlelweni.
Ngiyibhukha kanjani indawo?
Phendula imibuzo embalwa
Ukuze uqalise, uzodinga i-akhawunti ye-Airbnb. Uma usungene ngemvume ku-akhawunti, sizokubuza imibuzo embalwa ngawe nokuthi uthinteke kanjani. Sizohlola izimpendulo zakho, bese njengenjwayelo sikuphendula kungakapheli amahora angu-24.
Lapho usuvunyelwe, uzokwazi ukungena ezindaweni ezitholakala mahhala. Uma uthola indawo ekusebenzelayo, ungaxhumana nombungazi.
Sawubona: ngiye ngakhishwa ekhaya lami futhi ngidinga indawo yokuhlala. Ngizofika nezingane zami ezimbili.
Ucabanga ukuthi uzofika ngasikhathi sini?
Qinisekisa ukuhlala kwakho
Umbungazi angase abuze imibuzo eyengeziwe ngaphambi kokwamukela ukubhukha kwakho, futhi kungase kudingeke uxhumane nababungazi abambalwa ngaphambi kokuqinisekiswa kokuhlala kwakho.
Funda kabanzi mayelana nokubhukha
Nikeza indawo yokuhlala yezimo eziphuthumayo e-Los Angeles County and San Bernardino Counties, California
Unganikeza umuntu ovelelwe yinhlekelele noma umsebenzi osiza ezinhlekeleleni indawo yokuhlala mahhala.
Ngidinga indawo yokuhlala
Ababungazi nezivakashi baxoxa Ngezindlu Zezinhlekelele.
Sonke sifuna ukuthola indawo esizizwa sisekhaya kuyo. Indawo ehlanzekile, ozokwamukelwa kuyo, uzizwe uphephile.
Ukubungaza ngesikhathi kuneSiphepho uMichael
Ukusekelwa ngocingo okungu-24/7 kanye nezinsiza
Awuwedwa kulokhu. Ngaphezu kwethimba le-Airbnb elitholakala-24/7 elisiza amakhasimende, uzokwazi ukuxhumana nethimba elichwepheshile uma unanoma yimuphi umbuzo ngokubhuka Izindlu Zezinhlekelele.
Ukubuyiselwa imali ngenxa yomonakalo wendlu
Nakuba umonakalo oyingozi ungavamile, siyaqonda ukuthi ungadinga ukuvikelwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa sizobuyisela wonke umbungazi ngokulimala kwempahla ngakunye kuze kufike ku-$1,000,000.
Ukuhlolela ukufaneleka nohlolo oluthuthukisiwe
Kuyilapho kungekho sistimu engenaphutha, emhlabeni wonke siphethe abamele ama-ejensi nezivakashi ezibhukha ngokuqondile nge-Airbnb ngokumelene nokuqashelwa ukulawula, ubuphekula kanye nonswinyo.
Funda okwengeziwe ngezokuphepha